Badweyntimes.com » FARMAAJO oo ku dhawaaqay in uu wadahadal la furayo Donald Trump Xili Soomaalida..Badweyntimes.com
FARMAAJO oo ku dhawaaqay in uu wadahadal la furayo Donald Trump Xili Soomaalida..
Madaxweynaha cusub ee dhowaan la soo doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka hadlay xiriirka ka dhexeeya dowlada Soomaaliya iyo dowlada Maraykanka gaar ahaan xayiraadaha uu ku soo rogay Madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanka dadka Soomaaliyeed.
Waxaan jeclahay in aan kala hadlo dowlada Maraykanka waana isku dayayaa in go’aanka loogaga xanibay dalka Maraykanka dadka Soomaalida ah dib loogaga noqdo maadaama ay Soomaalida Maraykanka ku nool yihiin dad shaqeysta oo wax ku kordhiya wadanka Maraykanka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku tilmaamay kooxda Shabaab in ay dhib badan ku hayso shacabka Soomaaliyeed ayna dhibaatadaas ay shacabka Soomaaliyeed ay la noolaan waayeen wadamada caalamka.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaatay dhalashada Maraykanka kadib markii ay dagaalada sokeeye ka bilowdeen dalka Soomaaliya waxana 4 carruur ah oo uu dhalay ay ku nool yihiin wadanka Maraykanka.
Daawo:MD Farmaajo oo Madaxweynayaasha maamul goboleedyada shir deg deg ah muqdisho ugu qabtay
DEG DEG+SAWIR: Taliyahii Ciidanka X.D.S ee Qeybta 21-aad oo Geeriyooday…